२ नम्बर प्रदेशमा विकासको लहर सुरु भइसक्यो, सम्भावना मात्रै होइन अवसर पनि : रिजाल (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २९ मंगलबार , ३,९७८ पटक हेरिएको
सहयोगी विकास बैंक जनकपुरमा मुख्यालय भएको ‘ख’ श्रेणीको विकास बैंक हो । मोफसलमा स्थापना भएर आर्थिक समृद्धि देख्ने थोरै विकास बैंकमध्ये सहयोगी विकास बैंक पनि एउटा हो । २ नम्बर प्रदेशको राजधानी र कृषिको प्रचूर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो–जनकपुर । यिनै सम्भावना देखेर सहयोगी विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर २ नम्बर प्रदेशलाई समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सहयोगी विकास बैंक सहयोगी बन्ने बताउँछन् बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रिजाल । उनले कृषि र ग्रामीण पूर्वाधारमा बैंक केन्द्रित रहने बताए । बैंक सञ्चालनमा दुई दशकको अनुभव हासिल गरेका रिजालले अबको भविष्य भनेकै विकास बैंकको भएको बताए । मोफसलमा बैंक सञ्चालनको कठिनाइ, जनकपुरको सम्भाव्यताबारे सहयोगी विकास बैंकका सीईअाे विनय रिजालसँग गरिएकाे कुराकानी–
० प्रदेश २ मा के आर्थिक सम्भावना देखेर जानुभएको हो ?
– प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर हो, जनकपुरमा विकासका क्रम सुरु भइसकेको छ । जस्तो एडिबीको प्रोजेक्टरहरु त्यहाँ आइसकेको छ । मित्र राष्ट्र भारत जोड्ने १६ लेनको बाटो निर्माण सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकाससँगै बजार विस्तार भइरहेको छ । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ । विकासका काम भइरहेको ठाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेकै हुन्छ । एकपछि अर्को विकासको गतिविधि बढ्न थालेको छ । विकासको अवसर अहिले जनकपुरमै छ ।
० आर्थिक केन्द्र वीरगन्जमा छ, बैंक जनकपुरमा लाभदायिक हुनसक्छ ?
– अहिलेको हिसाबमा हामीले वीरगन्जलाई देखेका छौं । तर जनकपुरमा हेरौं भने सीतामढी, भित्तामोड क्षेत्रहरु छन् । यी मित्रराष्ट्र भारतसँगका आउटलेट हुन् । अहिले गौण छन् । भारतसँग जोडिएको बाटो जुन छ, त्यसलाई विशालरुपमा अगाडि ल्याएर १६ लेनको बनाएर भन्सार कार्यालयको प्रयोग गर्ने कुरा आइसकेको छ । वीरगन्ज जत्तिकै थियो, त्यत्ति नै सीतामडी र भिट्टामोड अगाडि आउन सक्छन् ।
० आर्थिक सूचांकमा प्रदेश २ अन्यको तुलनामा पछाडि छ । स्थानीय तहमा खुलेको बैंकले कसरी सामाजिक उत्तरदायी पूरा गर्छ ?
– विगतमा धनुषा र महोत्तरलगायतका छेउछाउ त्यत्ति विकास नभएकै हो । तर प्रदेशको संरचना भएसँगै अब विकास हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले जनकपुरमा स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै अगाडि बढेको छ । जस्तो २० वर्षअघि जनकपुरमा म एनबी बैंकको ब्राण्ड म्यानेजर भएर काम गर्दा र अहिले धेरै परिवर्तन पाएँ । त्यसबेला सीमित रुपमा एक दुई स्कुल थिए भने आजको दिनमा झन्डै २०–२५ वटा स्कुल छ । स्कुल पनि फरक किसिमको छ । स्नातक तहसम्म पढाइ हुने विभिन्न कलेज स्थापना भइसकेका छन् । शिक्षामा अगाडि त छँदैछ, स्वास्थ्यमा पनि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मित्रराष्ट्रबाटै उपचारका लागि आउँछन् । प्रसुतिसम्बन्धी उपचार जनकपुर जत्ति अरु क्षेत्रमा छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा जनकपुरमा धेरै अवसर छन् ।
० बैंकको उद्देश्य के हो ?
– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन निर्देशनमा अन्य बैंक सञ्चालित हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रलगायतको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा बैंकलाई दिएकै छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकले लगानी गर्नैपर्छ ।
सहयोगी विकास बैंकले अहिलेको हिसाबमा कृषितर्फ अलि बढी आकर्षित भएका छौं । हामी सामाजिक र व्यापारिक भन्दा पनि कृषितर्फ बढी जान्छौं । जस्तो त्यहाँ सुगर मिल छ, सुगर मिलका कृषकलाई हामी भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर निश्चित क्षेत्रमा लगानी दिने (माइक्रो ल्यान्डिङ) को अवधारणा हामीले सुरु गरेका छौं ।
माइक्रो ल्यान्डिङ भनेको कृषकलाई पैसा दिने, उनीहरुले उखु उत्पादन गर्ने, त्यो उखु चिनी कारखानालाई बेच्ने, त्यो कारखानाबाट बैंकमा लगानी गर्ने अवधारणा हामीले अगाडि ल्याएका छौं ।
अहिले जति एनजिओ, आईएनजीबाट जति विदेशबाट पैसा आउँछ, उहाँहरुले पनि कृषिमै लगानी गर्ने तयारी भएको छ । विकट ठाउँको कृषिमा जान अवधारणा आएको छ । उहाँहरु जनकपुर क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुहुन्छ । गाउँ गाउँमा कृषकलाई बैंकिङ अवधारणा पनि सिकाउने, कृषिबाट लिन सकिने लाभका बारेमा पनि हामी सिकाउँछौं ।
कृषकलाई अहिले कामदारको अभाव छ, जमिन बाँझो छ । हाम्रो अवधारणाअनुसार कृषिमा विकसित प्रविधि कृषकलाई उपलब्ध गराउँछौं ।
० प्राथमिकता साना किसान वा संगठित व्यापार व्यवसायीलाई हुन्छ ?
– संगठित किसानका लागि एक किसिमको अवधारणा हुन्छ र साना किसानका लागि बेग्लै किसिमको अवधारणा हुन्छ । ६० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म हामी संगठित किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्छौं । २ लाख रुपैयाँसम्म साना किसानलाई लगानी गर्न सक्छौं । ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म हामी धितो लिएर किसानको मागअनुसार हामी लगानी गर्न सक्छौं । राष्ट्र बैंक र विकास बैंकको नीतिअनुसार हामी लगानी गछौं ।
मुद्राको सहज आपूर्ति भएको छ : राष्ट्र बैंक
नेपाल बैंकले साढे दुई अर्ब कमायो
खुँजेली वाणिज्य बैंकमा पहिलो महिला सिइओ
बैंकमा सुनका नक्कली गरगहना राखेर ठगी गर्ने थुनामा
वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संथाबाट ८० अर्ब कर्जा पाउने
डेढ अर्ब बैंक घोटालामा राष्ट्र बैंककै हात ?
विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ प्रतिशतले घट्यो
एनआइसी बैंकको कामु सीईओमा रोशन न्यौपाने नियुक्त
एनसीसी बैंकका चार दर्जन अधिकृत सीआइबीको नियन्त्रणमा, डेढ अर्व घोटालाको आरोप